XOG: Puntland oo maanta go’aan ka soo saaray xariirka ay la leedahay DFS, xili shalay ay diiday…. – Puntlandtimes
GAROOWE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay Dawladda Puntland dhawaan soo saari doonto warsaxaafadeed ku wajahan arrimaha u dhaxeeya dawladda Faderaalka iyo dhankooda, gaar ahaana dhinacyada la xariira wada shaqeynta wasaaraddaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ay la leeyihiin.
Wasaaraddaha Waxbarashada, Tacliinta Sare, Tamarta iyo Macdanta ee Puntland ayaa soo saari doono in aysan waxba wada shaqeyn ah waqtigan la yeelan karin dhigooda dawladda Faderaalka, oo ay ku eedeeyeen in ay talooyinka iyo arrimaha muhiimka ah oo si gaar ah dhankooda u qaateen.
Golaha Wasiiradda ee Puntland ayaa lafilayaa in ay dhageystaan warbixino kala duwan oo ay wasaaraddahan jeedin doonaan, waxaana muuqata in kala aragti duwanaanshaha labada dhinacba uu mar hore gaaray meel sare.
Madaxweyne kuxigeenka ahna Kusimaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa shir gudoominaya kulanka golaha Wasiiradda ee maanta, waxaana si gaar ah isha loogu hayaa qodobada ka soo bixi doona.
7 Masuul oo katirsan dawladda Puntland, hayana xilal kala duwan oo ay ku jiraan Guddoonka baarlamaanka, Xildhibaano, Wasiiro, Wasiiru dowlayaal ayaa siyaabo kala duwan ugu jawaabay Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya oo eedeyn u soo jeediyey Puntland.
Xariirka u dhaxeeya Puntland iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in uuyahay mid dhaawacan waqtigan, iyadoo Madaxtooyada Faderaalku ay sameyn xoog badan ku lahayd doorashadii Puntland ka dhacday horaantii sannadkan balse ay ku guuldareystay in ay soo saarto musharaxii ay wadatay.
Waxa laga warqaba Dawlada fadaralka oo fadhigedu yahay magalada muqdisho oo aay ka arimiyan madaxaweyne maxamed Abdullahi farmajo & Ra’iisalwaraha Xassan Cali khayre,malinti Xilka lodortay shaqadi ugu horeysay waxay ka bilaben Duminta & faragalinta mamulgobaledyada somalida,arinkas waxuu kenay in wax kasta madaxa islagalan waxana meshas ku istagay wax alale waxii homar aha oo socdey waxa mesha kabaxay is aminadi,sababto ah dhawr jer oo hore heshisyo lawada galay waxay ka dhaqaqi wayen dhanka xukumada muqdisho,waxa muqanaysa masulinta muqdisho in aaysan ku shaqaynan wax Dasturka wafaqsan ee kaliya aay donayan waxay raban in aay fusho,arintas waxa ka horyimid mamulada wadanka intooda muhimka ah,kuwo aay dumiyen oo aay kasameysteen kuwo ujajaban oo yees mano ah.
Duminta maamul beeleedyada ay dalka ka sameeyeen MAHIGA, MALES , Iyo Gen Gabre Waa Soo celinta qarannimada Soomaaliyeed…Waana arrin ay ku saxan yihiin cid walba oo danaynaysa inay sii jirto waxii loogu yeeri jiray Somalia…Xoojinta maamul beeleedyadu waa xoojinta qabyaaladda iyo qabiilnnimada Soomaaliyeed, waana burburka midnnimada iyo Somalinnimada …Ku Adkaysiga Dawaldda Reerkayagu Mahan Mid Sii Jiri Karta!
Dablariday…abti iska aamus ha ka hadlin waxaa den aqli u laheen…somalia waxaan u sameyney dowlad federal ah..sadaan loogu noqon in Muqdisho ey burburiso wadenka in tiisa kale sidii 1991kii…muqdisho waa sideedii nabad la,aan…..
cumar cabdirashiid ma aha puntland ee ha is burburina